नेपालीलाई हाँस्न सिकाउदै : कमेडी सर्कल – HamroKatha
नेपालीलाई हाँस्न सिकाउदै : कमेडी सर्कल
कमेडी एउटा थेरापी हो
हाम्रो समाजमा अझै पनि मनको कुरा खुलेर व्यक्त गर्ने संस्कारको विकास भई सकेको छैन । "स्ट्यान्ड अप कमेडी" को माध्यमबाट यो संस्कारको विकासमा सहयोग पुगेको छ ।
हाम्रो कथा २०७५ फागुन १ गते १८:०४
तस्वीरमा: सुरज खड्गी, सह संस्थापक – कमेडी सर्कल
‘कमेडी सर्कल’ एक यस्तो मंच जहाँबाट नेपालमा “स्ट्यान्ड अप कमेडी” गर्ने कलाकारहरू जन्मिए I
यहाँ मन खोलेर हास्न युवाहरू जम्मा हुन्छन् I ‘कमेडी सर्कल’को भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएपछी त लाखौंको जमातलाई “स्ट्यान्ड अप कमेडी” को भिडियो नियमित रुपमा हेर्ने हत लागि हाल्यो I आफ्नो कामबाट घर फर्के पछी आनन्दले “स्ट्यान्ड अप कमेडी” हेर्दै दिनभरको तनाब बिसाउने बानी धेरै जनालाई लागि सक्यो I
यो ‘कमेडी सर्कल’को पर्दा पछाडीको कथा पनि रोचक छ I आइडिया जति उत्साहजनक छ, संस्थापक सदस्यहरुको यात्रा त्यस्तै अर्थपूर्ण छ I
हाम्रो कथा : “स्ट्यान्ड अप कमेडी” को कन्सेप्ट कसरी आयो ? यसको सुरुवात कसरी गर्नु भयो ? कति भयो सुरु गर्नु भएको ?
सुरज खड्गी : यो कुनै नौलो कसेप्ट हैन । तर पनि हामीले करिब झन्डै डेढ वर्ष अघि म र मेरो साथी अनुप घिमिरे मिलेर “स्ट्यान्ड अप कमेडी” सुरु गर्यौ । यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडी हाम्रो मुख्य पृष्ठभूमी प्रोडक्सन नै थियो । हामीले प्रोडक्सन हाउसबाट सर्ट फिल्महरु बनाउने काम गर्थियौ । त्यो बाहेक अर्को इन्हाउस कम्पनी ‘भिउ फाइण्डर्स’ पनि छ। जसले अन्य कम्पनीहरूको लागी विज्ञापन देखि लिएर भिडियोहरू बनाउने काम गर्छ । तर काम गर्दै जाँदा हामीलाई के महसुस भयो भन्दा आफ्ना निम्ति चाहिँ प्रोडक्टिब काम केही नै भएको रहेनछ । हामीले सर्ट फिल्म गर्यौ तीआफैलाई इफेक्टिब लाग्दैनन् ।
अनि नेपालमा के हुन सक्छ भन्दा कमेडी; मह जोडी को काम सधैँ राम्रो छ तर आजको पुस्ताको स्वादमा भने नभएको देखेर, आजको पुस्ताले खोजेको कमेडीका विषयमा सोच्न थाल्यौँ ।
मैले चाहिँ पहिलै देखि विदेशी कमेडी धेरै हेर्ने गर्दथे । अनि त्यस्तै विषयवस्तु हाम्रोमा आवश्यक छ जस्तो लाग्यो । अनि आफू प्रोडक्सन मै भएको भएर प्रयास गरी हेरौँ न त भनेर सुरु गर्यौ । सुरुमा मेहनत र समय धेरै लाग्यो । कलाकार र से टप गरी धेरै समय लगाएर मात्र ल्याएका हौ । अनि एउटा भिडियोबाट राम्रो प्रतिक्रिया आयो I अन्य कलाकारले पनि सम्पर्क गर्न थाले । अनि सुरुमा तीस एपिसोड चाहिँ ‘सिजन-एक’ नाम दिएर स्टुडियोमा गर्यौं । त्यसपछि ‘सिजन-दुई’ बाट रेस्टुरेन्टहरूमा गर्न थाल्यौं । यसरी नै चलिरहेको छ ।
हाम्रो कथा : सुरुवाती चरणमा रिसर्चहरू चाहिँ के-कस्तो गर्नु भयो ?
सुरज खड्गी : हामी दुई शुद्ध प्रोडक्सन क्षेत्रबाट हौँ । त्यसले गर्दा सेट चाहिँ कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ, कहाँबाट लाइट दिनु पर्दो रहेछ, भिडियो क्वालिटी कस्तो हुनु पर्छ, अडियो क्वालिटी कस्तो र कहाँबाट आउनु पर्दो रहेछ यस्तै कुरामा चाहिँ हाम्रो रिसर्च केन्द्रित भयो ।
सामान्य हिसाबले “स्ट्यान्ड अप कमेडी” भनेको के हो ? कसरी गर्दा ठिक हुन्छ ? भन्ने शैलीमा पनि अलिअलि काम गर्यौं ।
हाम्रो कथा: सुरुवाती चरणमा काम सुरु गर्दा र अहिलेसम्म पनि कलाकारहरूले अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग भएको पाईन्छ I हाम्रो समाजको अधिक उमेर समुहले सजिलै पचाउन थालिसकेको छैन I यो कुरालाई लिएर चाहिँ कहीँ कतैबाट अवरोध आएको छ कि छैन ?
सुरज खड्गी : हरेक कुरामा आलोचना गर्नेहरू त भेटि हालिन्छ नि । अब, “स्ट्यान्ड अप कमेडी”को कुरा गर्दा नेपालमा कस्तो छ हरेक कुरामा सेक्स कै व्यङ्ग्य , अश्लील शब्दका कुराहरू ट्याबुको रूपमा विकास भएको छ । यो बोल्नु हुँदैन है भन्ने सोच विकास गराइएको छ । तर समय सँगै विदेशमा मात्र होइन I नजिकैको छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यो संस्कार परिवर्तन भैसकेको अवस्था छ । हामी अगाडी बढ्ने हो भने समय सामेक्षित रूपमा हिँड्न सक्ने पर्छ । पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने हामी हाम्रा बा-बाजेले बाचेकै जीवन बाच्नु पर्ने हुन्छ । र अस्लिलता भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिराने छ । तर हिजो गुम्सिएर रहेको थियो जसले गर्दा त्यो बिस्पोट हुँदा नराम्रो दुर्घटना आउने अवस्था थियो । मैले यसो भनी रहँदा यसलाई बढुवा दिन खोजेको भने हैन । पछिल्लो समय चाहिँ हामीले आवश्यक ठाउँ बाहेक त्यस्ता शब्दहरूलाई फिल्टर पनि गर्दै छौ ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि मनको कुरा खुलेर व्यक्त गर्ने संस्कारको विकास भई सकेको छैन । “स्ट्यान्ड अप कमेडी” को माध्यमबाट यो संस्कारको विकासमा सहयोग पुगेको छ ।
हाम्रो कथा: सुरुवाती चरणमा यस किसिमका कलाकारहरू कहाँ पाउनु भयो ?
सुरज खड्गी : रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा कलाकारहरू हामीले खोज्यौं I फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालको माध्यमबाट धेरै कलाकारहरू आउनु भयो । एक जना यस्ता व्यक्ति पनि आउनुभयो I उहाँले हामीलाई भन्नुभयो कि ‘म “स्ट्यान्ड अप कमेडी” कै लागी काठमाडौँ छिरेको हुन हुँ।’ कारण बस हामीले उहाँसँग काम गर्न सकेनौ । यो हाम्रा निम्ति प्रेरणा बन्न पुग्यो र हाम्रो उत्साह बढ्दै जान्छ ।
हाम्रो कथा : अहिले तपाइहरूले कलाकारहरू कसरी ल्याई राख्नु भएको छ ?
सुरज खड्गी : अहिले हामीले के गरिरहेका छौ भन्दा प्रत्येक वर्किङ्ग-डे (आईतबार देखि शुक्रबार) मा अडिसन लिने गरेका छौ । त्यसपछि दोश्रो चरण आउँछ ।
अडिसनबाट छानिएका कलाकार बिच प्रत्येक आइतबार बेलुका ५:३० बजेमाओपन माईक गर्छौ । जसमा छनोट भएका कलाकारले प्रस्तुती गर्छन् र त्यहाँ हामी लागत सिनियर कलाकारहरू पनि बस्नुहुन्छ I कलाकारको पस्तुतीमा सुधार ल्याउन हामीले प्रतिक्रिया ‘फिडब्याक’ दिने गर्छौ ।
हाम्रो कथा : सुरुमा जुन सोचले काम सुरु गर्नु भएको थियो काम गर्दै जाँदा अनुभव पनि बटुल्ने मौका बटुलियो । कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सुरज खड्गी : सन्तुष्ट नै छौ । किनभन्दा कमेडी सर्कल नेपालमा पहिलो “स्ट्यान्ड अप कमेडी” प्लाटफर्म हो ।
नेपालमा फेरी कस्तो छ भन्दा, एउटा केही नयाँ अथवा राम्रो भईरहेको छ भने त्यसलाई चियाउ उम्रे झैँ कपि गरिन्छ । जस्तो कि हामीले “स्ट्यान्ड अप कमेडी” सुरु गर्यौं, त्यसपछि बजारमा टन्नै अन्य हाम्रै जस्तो “स्ट्यान्ड अप कमेडी” गर्नहरू आउनुभयो । कतिपयले हामीबाट प्रेरित भएर काम गर्नु भएको छ । तथापि हामी सन्तुष्ट नै छौँ । तर चुनौतीपूवक प्रतिस्पर्धा भने बढ्ने नै भयो।
हाम्रो कथा : दर्शकहरूको प्रतिक्रियामा सुरुवाती दिन हुँदै आजसम्म आईपुग्दा के परिवर्तन पाउनुभएको छ ?
सुरज खड्गी : पहिलो शृंखला ‘एपिसोड’ हेर्ने हो भने; ह्या यस्तो हावादारी काम त म पनि गरिदिन्छु नि, यसरी त म पनि हसाइदिनछु नि, यो भन्दा धेरै त मै हसाइदिन्छु होला भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू आउने गर्थियो । स्वाभाविक पनि होला; कमेन्ट गर्न मात्र त गाह्रो पनि छैन तर केही मान्छेको अगाडी बोल्न र झन् उनीहरूलाई हँसाउने काम सजिलो भने पक्कै छैन ।
पछिल्लो समय चाहिँ मान्छेले बुझ्दै हुनुहुन्छ । अहिले चाहिँ धेरैले राम्रो छ भन्छन् I अझै अहिले चाहिँ कलाकारको फ्यान फलोयिङ्ग बढेको पनि छ I फ्यानहरु आफ्नो फेब्रेट कलाकारको अर्को प्रस्तुतीको माग गर्न थाल्नु भएको छ । यो कुरा हाम्रो निम्ति सकारात्मक हो ।
हाम्रो कथा : पछिल्लो समय हास्य-व्यङ्ग्य क्षेत्र पनि राम्रो हुँदै छ I यहाँहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?
सुरज खड्गी : हास्य-व्यङ्ग्य क्षेत्र धेरै राम्रो हो । हाम्रो त एउटा लक्ष्य नै थियो कि; नेपालको कमेडी प्याटन परिवर्तन गर्नुपर्छ I हामीले गरेनौ भने अहिलेको समयको माग अनुरूपको यो क्षेत्रको प्रगती सम्भव छैन भनेरै काम थालेका थियौं I यो क्षेत्र राम्रो हुँदै गएकोमा हामी एकदमै खुसी छौ ।
किन भन्दा कमेडी एउटा थेरापी नै हो जस्तो लाग्छ । मान्छेलाई रुवाउन त सजिलो होला तर हँसाउन चैँ गाह्रो छ ।
हाम्रो कथा : भविष्यमा “स्ट्यान्ड अप कमेडी” लाई हामीले कुन रूपमा देख्न सक्छौ ? त्यस्तो केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ जसले यसलाई अर्को कदममा पुर्याओस ?
सुरज खड्गी : “स्ट्यान्ड अप कमेडी” भनेको ‘सो’हरु नै हो I तर यसमा हाम्रो सोच चाहिँ के रहेको छ भने अहिलेका हाम्रा कलाकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म लैजानु छ । कोहि कलाकार बाहिरबाट अथवा भारतबाटै कलाकारआउँदा करोडौँको कमाई लैजाने गर्दछन् । त्यो त हाम्रो पैसा बाहिर गयो नि त !
हामीले चाहिँ भविष्यमा के सोची रहेका छौ भन्दा; नेपाली “स्ट्यान्ड अप कमेडी” ले बाहिर गएर त्यहाँको पैसा यहाँ लिएर आउन सकियोस् I यसरी देश कै निम्ति केही सहयोग पुर्याउन सक्षम हुन्छौं । यही सोच छ I काम गर्दै छौ I
तस्वीरमा: अनुप घिमिरे, सह संस्थापक – कमेडी सर्कल
(सुरज खड्गीसँग ईश्वर लुईटेलले गरेको कुराकानीमा आधारीत)